UKUSONGELWA KONKE UKUJONGA KWIXESHA LIKALUSIFA LEXESHA LESI-5 ABAQHELEKAYO ABANOKUQHUBEKA OKANYE BAGQITHE - IINKQUBO ZETV
Uthotho oludumileyo uLucifer lusetelwe ukubetha izikrini ze-5 kunye nexesha lokugqibela. Yi
Uthotho oludumileyo uLucifer lusetelwe ukubetha izikrini ze-5 kunye nexesha lokugqibela. Kuluhlu olubandakanya iingelosi, iidemon, abantu kunye nezicwangciso zikaThixo. Ibonisa indlela acwangcise ngayo uThixo ukwenza zonke izinto ezisemhlabeni.
Uthetha ngantoni lo mboniso?
Uthotho imalunga nenye kuphela, i-Lucifer Morning Star, inkosi yesihogo.
Ngubani oshiya iSihogo ukuba abe neholide eMhlabeni.
Uthotho lubandakanya u-Amenadeil (ingelosi kaLusifa), uMazekeen (idemon), uGqirha Linda, uMcuphi uCloe Decker, kunye noDetective Daniel (umyeni kaChloe'sex) kunye nabanye abalinganiswa.
Ikhwezi lasekuseni likaLusifa , owayesaziwa ngaphambili njengoSamael, ophambili kuLusifa.
Ungumdala wesithathu kuzo zonke iingelosi zikaThixo kunye nomlawuli aziwayo esihogweni.
Kwiminyaka elandela ukushiya kwakhe esihogweni, uLusifa ukhula kwiindlela zakhe zokufuna ulonwabo. Ukufumana ukwaneliseka ngakumbi ekuziseni okusesikweni kumaxhoba kunye nokukhangela uthando lwenene, uLusifa uba ngumntu obaluleke ngakumbi.
Kloe kunye noLusifa ngabahlobo kunye nabalingane. U-Lucifer unomdla wokuba angamelana njani nokuthandeka kwakhe kwaye kutheni le nto esemngciphekweni wobukho bakhe.
Mva nje, uLucifer noChloe ekugqibeleni baqale ukuqaphela iimvakalelo zabo ezinamandla zothando omnye komnye. Ikwabonakalisile ukuba uLusifa uyayenza inyani, uziva uChloe njengoko ebelusizi emva kokubukela uPierce ecebisa uCloe.
Mazikeen , a Maze, sisidemon esisesandleni saseLucifer kunye nomhlobo osenyongweni. Nguye owanqumla amaphiko akhe wamsindisa.
Ubuhlobo babo buthatha indawo enkulu xa uMaze efumanisa izicwangciso zikaLucifer malunga nothixokazi nezulu. Uziva exokisiwe kwaye engcatshiwe, nokushiya kwabo bobabini besilwa.
U-Lucifer no-Amenadiel ngabazalwana kwaye banomdla wokuthintela ukuthandana. Nangona, njengoko ibali liqhubeka, bafunda ukumelana kunye. Ngokukhawuleza uLucifer uba ngu-Godfather wonyana ka-Amenadiel, uCharlie. U-Lucifer uqalile ukumkhathalela ngokwaneleyo kangangokuba uye wabuyela esihogweni ngokuzithandela ukuze ayeke iidemon ukuba zingamthimbe.
UGqr Linda Martin
Intle Ngugqirha kaLucifer, owaziswa ngexesha loku-1. Uye amthande njengoko emnceda kwiingxaki zakhe.
Kuthatha ixesha elithile ngaphambi kokuba avelise indlela yobungcali yokujongana noLucifer njengoko emkhumbuza ukuba ufana nezinye izigulana ezifuna isikhokelo sakhe. Nangona, ngenxa yezenzo zikaLucifer ku-God Johnson, uLinda usemngciphekweni wokuba angalahla iphepha-mvume lakhe.
U-Lucifer no-Ella baqala ukudibana ngelixa babephanda ukubulawa kukaGillian Taylor. Emva kokudibana noLucifer, uElla wamanga ngokukhawuleza ngelixa uLucifer esiba lukhuni. U-Lucifer unomdla wokuba kutheni engenayo impendulo engathandekiyo kuye xa ezibonisa ukuba ungusathana.
U-Lucifer uyangqina ukuba uyabacaphukela abantwana kwaye akazi ukuba adibane njani nabo. Nangona uTrixie emthanda uLusifa kwaye uhlala ethotywa xa embona. Ude abaleke aye kuye emanga. Nangona ebonisa ngokungathi akamkhathalele, uhlala ezama ukwenza konke okusemandleni akhe ukumgcina ekhuselekile xa esengozini.
ULusifa uyakucaphukela Kwaye , Kwaye ubhekisa kuye njengoMcuphi uDouche. UDan akamthandi uLusifa, ephakamisa ukungavisisani nolwalamano lwakhe noChloe noTexie.
U-Lucifer uba nomona xa uDan ehlangana noChloe. Ke, uzama ukuba uLinda abahlule kwakhona.
Unxibelelwano lwabo lwenza ukuba uLusifa abe nembono engalunganga ye-LAPD, kwaye kwindalo iphela, ukhankanya uDan njengoMcuphi uDildo.
Inxalenye yokuqala yesizini yesihlanu kaLucifer yayimangalisa kwaye abalandeli balinde ngomonde icandelo lesibini eliza kuba yinxalenye yokugqibela. Abalandeli baphantse badumba ngelixa bethetha ngaloo nto. Masilinde kwaye sibukele umlawuli weSihogo ezalisekisa ikamva lakhe.
umtyholi yi-anime yexeshana
Ukufa okuhambayo kuya kuba nini kwi-netflix
re: zero zero 2 iphela ichaziwe
umtyholi yingxenye yexesha!
indlela yokujonga i-arrowverse crossovers
umzingeli x umzingeli togashi
Uluhlu oluphezulu lwe-anime episode